चीनबाट आएका कामदारलाई देख्दा हच्किन्छन् स्थानीय – SaipalNews.com
लमजुङ २० फागुन । मर्स्याङ्दी–६ दिङदिङकी गीता अधिकारी ठूलीबेंसीस्थित जटेश्वर आधारभूत विद्यालय पढाउँछिन् । नजिकै चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गरिरहेको ३० मेगावाटको न्यादी जलविद्युत् आयोजना छ । उनी चिनियाँ क्याम्प हुँदै आउजाउ गर्छिन् । चिनियाँ कामदार क्वारेन्टाइनबिनै आएको थाहा पाएका गाउँलेले भने गीतालाई हेपाहा व्यवहार गर्न थालेका छन् ।
कोभिड सार्न सक्ने भन्दै गाउँलेले ‘गाउँ निकाला गर्नुपर्छ’ भन्नेसम्मको चेतावनी दिएको उनले सुनाइन् ।लमजुङको न्यादी जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ कामदार फर्किएपछि त्रसित बनेका स्थानीयलाई कोरोना भाइरसबारे सचेतना गराइँदै ।
‘बाटोमा हिँड्दै गर्दा दुईरचार जनाले मलाई गाउँ निकाला गर्नुपर्छ भन्दा रहेछन्,’ सोमबार ठूलीबेंसीमा आयोजित सचेतना कार्यक्रममा उनले भनिन्, ‘१४ दिनको क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने रातारात आएपछि गाउँले त मलाई पो निकाला गर्नुपर्छ भन्छन् ।’ नाइचे गाउँ टोलसुधार समितिका अध्यक्ष केशबहादुर गुरुङका अनुसार चिनियाँले बनाउँदै गरेको ड्यामबाटै आउजाउ गर्नुपर्दा सकस छ । उनले भने, ‘हामीलाई कोरोना लागिहाले यो जिम्मा कम्पनीले बेहोर्छ कि नेपाल सरकारले?
कोभिड संक्रमित चीनका नागरिक रातारात आएर जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा जुटेपछि स्थानीयले असुरक्षित महसुस गरेका छन् । आयोजनामा कार्यरत ३८ चिनियाँ यहाँ आइसकेका छन् । उतै रहेका १९ जनालाई आउन नदिन स्थानीयले सरकारसँग माग गरेका छन् । आयोजनाका प्रशासकीय अधिकृत वासुदेव गड्तौलाले उनीहरू आउनेबित्तिकै केही घण्टा आराम गरेर काममा खटिएका छन् । आइसकेका चिनियाँलाई मार्च १५ सम्म स्थानीयसँग नभेट्न, सँगै खानपिन नगर्न र काम नगर्न भनिएको गड्तौलाले बताए ।
चिनियाँ कामदार भित्रिएपछि न्यादी आयोजना प्रभावित क्षेत्र मर्स्याङ्दी गाउँपालिका–६ र ७ का स्थानीय त्रसित बनेको भन्दै सचेत गराइएको छ । कोभिडप्रति नकारात्मक धारणा स्थानीयमा विकसित भएपछि जिल्ला प्रशासनको संयोजनमा जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मीलगायतको टोली सोमबार ठूलीबेंसी पुगेको थियो । लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अस्पतालका डा वीरबहादुर स्याङ्तानले कुनै पनि रोगप्रति मानिसको नकारात्मक धारणा बाहिर आए यसले सबैलाई असर गर्ने बताए ।
‘सुक्खा खोकी, श्वासप्रश्वासमा समस्या, अत्यधिक ज्वरो आएमा कोरोनाको लक्षण हुन सक्छ । संक्रमित ठाउँबाट आएकासँग घुमिल भएमा सर्ने बढी सम्भावना हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसको जाँच लमजुङमा हुँदैन । नमुना लिएर शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा मात्र परीक्षण गर्न सकिन्छ ।’ निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिलकुमार शाहीले चिनियाँ नागरिकको पासपोर्टको फोटोकपी, उनीहरू आएको प्रान्त, स्वास्थ्य अवस्थालगायत विवरण माग गरिएको बताए । यो समाचार कान्तिपुरमा छ ।
हेर्नुस् सरकारी सवारी यसरी दुरुपयोग हुन्छन,प्रहरी भने हेरेको हेरै ।
ओलीको अभिव्यक्ति र व्यवहारले एकता जटिल मोडमा पुग्यो : डा. भीम रावल
नेपालमा आज थप १ हजार ३९ नयाँ कोरोना संक्रिमित थपिए, थप ९ को मृत्यु
हरिलाल भट्टराईको भीम रावललाई कार्ल माक्सको जन्मथलोबाट खुला पत्र
राम भारतीय हुँदै होइनन्ः प्रधानमन्त्री